5 meelood oo la saadaaliyay in dagaalkii 3aad ee dunidu ka dhici karo 2020. – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA 5 meelood oo la saadaaliyay in dagaalkii 3aad ee dunidu ka dhici...
5 meelood oo la saadaaliyay in dagaalkii 3aad ee dunidu ka dhici karo 2020.
Wargays kasoo baxa dalka maraykanka oo lagu magacaabo nationalinterest ayaa waxa uu saadaaliyay 5 meelood oo laga yaabo in dagaalkii 3aad ee dunidu ka dhici karo 10-ka sano ee soo socda, waxaana ka mid ah:
Iran iyo Israaiil ayaa sannadihii u dambeeyay aad ugu loolamayay bariga dhexe. Iran waxa ay taageertaa kooxaha kasoo horjeeda Yuhuudda ee jooga marinka Qasa, Lubnaan, Suuriya iyo weliba meelo kale, halka Israaiilna ay marar badan duqaysay saldhigyo ay ciidamada Iran ku leeyihii Suuriya iyo meelo kale, waxaana xaaladdu kasii dari kartaa marka Iran ay bilawdo inay sii horumariso Nukliyeerkeeda.
Xiisada u dhaxaysa labadan waddan ayaa aad usii xumaanaysay sannadihii u dambeeyay kadib isku daygii inqilaab ee fashilmay, waxaana xaaladu cirka isku sii shareertay markii dawlada Ankara ay cadaw u aragtay kooxaha kurdiyiinta Suuriya ee Maraykanku taageerada siiyo islamarkaana ay kabaha la dulmartay taasoo maraykanku ka cadhooday cunaqabatayna uu kusoo rogay.
Maraykanka ayaa bariga Turkiga ku leh saldhig Militari oo ay u yaallaan 50 madax oo Nukliyeer ah, waxaana dhawaan uu ku hanjabay Madaxweynaha Turkigu in uu xidhi doono saldhiggaas.
Tan iyo intii uu xilka qabtay xilka qabtay Raysalwasaaraha cunsuriga ah ee India Neranda Modi waxa cirka isku shareera nacaybka u dhexeeya xukuumadda India iyo islaamka gobolka Kashmir oo taageero ka helaya Pakistan.
Neranda Modi ayaa maamul hoosaadkii iyo awoodihii gaarka ahaa ka qaaday gobolka Kashmir waxaana dhici karta in labada waddan ee Nukliyeerka ku hubaysan ay gacanta is daraan maadaama Kashmiiriyiinta ay rabaan inay ka goostaan India ama ku biiraan Pakistan.
4- GACANKA KUURIYA
Sannadihii u dambeeyay waxa jiray xurguf adag oo u dhaxaysay Maraykanka iyo Kuuriyada koonfureed taasoo ka dhalatay horumarinta gantaalaha iyo Nukliyeerka ee Kuuriyada koonfureed, wada hadallo muddo u socday ayaan midba midka kale aaminsanayn.
5- KOONFURTA SHIINAHA
Waa bad aad u weyn oo u dhaxaysa waddamo badan oo ay ka mid yihiin Filibiin,Indonesia,Shiinaha, Maleysia iyo Vietnam, mana laha xuduud cayiman oo kala saarta waddamadaas oo dhan. baddan waxa ceegaaga khayraad badan balse dhibta u weyn aya ah in Ciidamada Maraykanku joogaan islamarkaana Shiinuhu u arko in isagoo awood caalamiya ah in Baddiisii uu Maraykan joogo taasoo keeni karta isku dhac.
Gebogabadii qoraalka oo uu qoray Dr. Robert Farley oo ah bare Jaamacadda Kentucky ka dhiga Siyaasada iyo ganacsiga caalamiga ah ayaa waxa uu kusoo gabo gababeeyay in mustaqbalka 10-ka sano ee soo socda uu hooseeyo in isku dhac dunida ahi. waxaana la dhawri doonaa natiijada doorashada maraykanka iyo siyaasaddooda 4 ta sano ee socota taasoo faham wanaagsan laga heli doono.